HBO မှစာရင်းပေးသွင်းရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြတယ် Gadget သတင်း
Ignacio Sala | | လွှ, လဲ tutorial
သက်ဆိုင်ရာ Thrones အားကစားရာသီပြီးဆုံးသည်နှင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအသုံးပြုသူများသည် HBO ထံမှစာရင်းမယူရန်ဘုံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်ဟုထင်ရသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောကျန်ရှိသည့်ကိန်းဂဏန်းများကိုအခွင့်အရေးမပေးဘဲနှင့်.
လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးအရ HBO စာရင်းပေးသွင်းသူအရေအတွက်သည်ကြယ်စီးရီးများအဆုံးသတ်ပြီးသည်နှင့် ၇၅% လျှော့ချသည်။ အပြီးသတ်အဆုံးသတ်သွားသောစီးရီး၊ လူတိုင်းမနှစ်သက်သောအဆုံးသတ်တစ်ခု (ဤကဲ့သို့သောမီဒီယာအမျိုးအစားတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်) စီးရီး)။ သင်အချိန်ရောက်လာပြီထင်လျှင် HBO မှစာရင်းမယူပါဒီမှာလိုက်နာရမည့်အဆင့်များ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကြိုးစားမှုမပါဘဲမဖျက်သိမ်းခင်၊ နံပါတ်အတော်များများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားစေခြင်းငှါအချက်များ။
1 HBO ကြေးပေးသွင်းမှုနှင့်အတူဆက်လက်အကြောင်းပြချက်
2 အရာအားလုံး HBO အပေါ်ကောင်းပါတယ်
3 HBO မှစာရင်းသွင်းပါ
4 Vodafone တွင် HBO မှမည်သို့စာရင်းသွင်းရမည်နည်း
5 HBO ကြေးပေးသွင်းမှုကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပါ
သမိုင်းကြောင်းအရ HBO သည်ရုပ်မြင်သံကြားမှစီးရီးများစွာ၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိခဲ့သည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းပျော်မွေ့နိုင်သောအချိန်ကုန်ဆုံးဂန္ထဝင်ဖြစ်လာသည်။ လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာဥပမာအချို့ စစ်မှန်သောစုံထောက်, နယူးယောက်, The Wire, The Sopranos, အောက်တွင်မီတာနှစ်ခု, WestWorld, အကောင်းဆုံးလူသိများအမည်။
သို့သော် HBO catalog သည်ထိုအတိတ်ကိုသာအခြေမခံပါ။ လောလောဆယ်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုစီးရီးပေးထားပါတယ် Eveဝကိုသတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လူကြီးလူကောင်းဂျက်၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ပုံပြင်၊ Fosse / Verdon၊ Doom ကင်းလှည့်နှစ်များ၊ နှစ်များ... ဒီစီးရီးတွေအများကြီးကအမြဲတမ်း Emmy Award ဆုတွေအများကြီးရပြီး၊
ဒါပေမယ့်လည်း ငါတို့ရရှိထားတဲ့နေရာမှာရုပ်ရှင်အမျိုးအစားများစွာကိုထည့်ထားတယ်၊ Netflix နှင့်တူသော်လည်းရရှိနိုင်သောကတ်တလောက်သည်အထူးဆွဲဆောင်မှုမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ HBO ကြေးပေးသွင်းမှုမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောခေါင်းစဉ်အချို့မှာဟယ်ရီပေါ်တာရုပ်ရှင်၊ အင်တာစတယ်၊ ဟောင်ကောင်ဖြစ်သည်။ Skull ကျွန်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှု၊ Warren ဖိုင် - The Enfield Affair၊ Despicable Me Gru ရုပ်ရှင်၊ Rock Saga တစ်ခုလုံး ...
အရာအားလုံး HBO အပေါ်ကောင်းပါတယ်
HBO နှင့်တွေ့ရသည့်ပြproblemနာမှာမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့် ၄ င်းတို့ရရှိနိုင်သည့်အခြားပလက်ဖောင်းများ၏အရည်အသွေး (Apple TV, Chromecast, Smart TV, PS4, Web ... ) နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဗွီဒီယို၏အရည်အသွေးဖြစ်သည်။ မသက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကန်ထရိုက်ပါပြီအမြန်နှုန်း.
နောက်ဆုံးရာဇ ၀ တ်ကစားနည်းများကစားစဉ်တွင်ဘာသာရေးကို ၀ ယ်ယူသူများကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည် စီးရီးကိုခံစားရန် HD အရည်အသွေးရှိပင်လယ်ဓားပြဇာတ်လမ်းတွဲကို download လုပ်ပါ ဤ streaming video service သည်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်ခံစားရမည့်အစား။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား 1080p တွင် 4k option နှင့် HDR လျော့နည်းမှုရှိသောအကြောင်းအရာများကိုသာခံစားရန်ခွင့်ပြုသည်။
ပလက်ဖောင်းရှိအကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းပြproblemsနာများရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသူများစွာသည်တူညီသောအကြောင်းအရာများကိုအတူတကွ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်နေကြသည့်အခါများမကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်။ Game of Thrones နှင့်အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းတင်ဆက်သည့်အချိန်နှင့် Premiere နောက်ပိုင်းနာရီများ၌ဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်သောယူရို ၇.၉၉ ဖြစ်သော HBO မှာယူမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည် ရုံ2devices များပေါ်တွင်တစ်ပြိုင်နက်အသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြားသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မိသားစုများနှင့်မျှဝေခွင့်မပြုပါ။ Netflix ဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောထုတ်ကုန်များ၏အများဆုံးကန့်သတ်ချက်သည် ၄ ​​ဖြစ်သည်။
HBO ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောကတ်တလောက်နှင့်၎င်း၏စီးရီးများ၏အရည်အသွေးများရှိလင့်ကစား၎င်းတို့သည်အချိန်ရောက်နေပြီဟုဆက်လက်တွေးတောနေကြသည် HBO ဖြင့်သင်၏စာရင်းသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်ပါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းလုပ်နိုင်ရန်ခြေရာခံသမျှကိုပြသည်။
HBO မှစာရင်းသွင်းရန် ကျွန်တော်တစ် ဦး browser ကိုမှတဆင့်ပြုရပေမည်အပလီကေးရှင်းကိုယ်တိုင်မှကျွန်ုပ်တို့တွင်၎င်းကိုလုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည် HBO ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ကြည့်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူအမည် (အီးမေးလ်) နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုထည့်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့ကြည့်လိုသောအကြောင်းအရာအမျိုးအစားများ၊ စီးရီးများ၊ ရုပ်ရှင်များသို့မဟုတ်ကလေးများ (အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဤရွေးစရာကိုသက်ဝင်ခဲ့လျှင်) ကိုရွေးချယ်သည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညာဘက်အပေါ်ထောင့်သို့သွားပြီးကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုနှိပ်ပါ။ မိဘထိန်းချုပ်မှုကိုထည့်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်သောကိရိယာများကိုဖျက်နိုင်သည်၊ ငွေပေးချေမှုမှတ်တမ်းကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်၊ စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subscription ကိုစီမံခန့်ခွဲ.
ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် စာရင်းသွင်းခြင်း, ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ငွေပေးချေရန်အသုံးပြုသောခရက်ဒစ်ကဒ်သို့ငွေသွင်းမည့်နေ့ရက်ကိုညာဘက်ကော်လံတွင်ပြလိမ့်မည်။ ထိပ်မှာကျနော်တို့ option ကိုရှာပါ စာရင်းပေးသွင်းရန်.
၀ န်ဆောင်မှုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုမှပေးဆပ်ခြင်းကိုပယ်ဖျက်လိုပါကဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ HBO သည်လက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းထားသည့်အရာများနှင့်လာမည့်အရာများ၏စာရင်းကိုကြည့်ရှုရန်အကြံပြုသည်။ ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့သည် HBO အတွက်ဆက်လက်ပေးဆပ်ရန်မလိုချင်ပါ၊ Cancel subscription ကိုနှိပ်ပါ.
Vodafone တွင် HBO မှမည်သို့စာရင်းသွင်းရမည်နည်း
ဒါကို ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ယူမှတ်မယ်ဆိုရင် Vodafone အခမဲ့ပါဝင်သည် ဤအော်ပရေတာနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှုကန်ထရိုက်ရှိသောဖောက်သည်အားလုံးတို့တွင်ပလက်ဖောင်းမှစာရင်းမယူရန်မလိုအပ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုမတွေ့ရသေးသောကြောင့်များစွာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ HBO အတွက်မခံမရပ်နိုင်သည့်အရိပ်အယောင်ကိုငါတို့တွေ့ခဲ့ရပြီ ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းဖျက်သိမ်းလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ HBO ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်မလုပ်နိုင်ပါ၊ သို့သော် Vodafone ကိုဖောက်သည်ကဏ္ within အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့အား ၄ င်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည့်လျှောက်လွှာမှတဆင့်ပြုလုပ်ရမည်။
ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ HBO စာရင်းသွင်းခြင်းကိုလက်လှမ်းမီသောနောက်ဆုံးသောနေ့တွင်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုပယ်ဖျက်လိုက်သောစာနှင့်အတူ My Account အပိုင်းသို့ပြန်သွားပါမည်။ ထူထောင်ရက်စွဲမတိုင်မီပါ HBO ထံမှစာရင်းမယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်စဉ်းစားသည်ကျွန်ုပ်၏ Account> Subscription သို့ သွား၍ Reactivate subscription ကိုနှိပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » HBO မှမည်သို့စာရင်းသွင်းရမည်နည်း
Windows start menu မှာ shortcut တစ်ခုဘယ်လိုထည့်ရမလဲ
New Amazon Echo Show 5: စပီကာနှင့်မျက်နှာပြင်တူညီသည်